ရှယ်တန်ပြီးရှယ်ကောင်းတဲ့ ပင်လယ်စာကို ရှာဖွေနေတတ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် – FoodiesNavi
By yin sandi On April 26, 2018 0
ပင်လယ်စာအသည်းစွဲတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းလေးလာပါပြီ။ ? စားနေကျပင်လယ်စာဆိုင်တွေကို ခဏမေ့ထားလိုက်ပြီး Foodies Navi ကအသစ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် စျေးတန်ပြီးအရသာရှယ်ကောင်းတဲ့ပင်လယ်စာဆိုင်လေးကို သွားစားကြည့်ဖို့အတွက် လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ article ကိုဆက်မဖတ်ခင်မှာ သူငယ်ချင်းလေးယောက်သာ အပြေးလေးစုထားလိုက်ပါနော်(လေးယောက်လုံးအဝကြိတ်နိုင်မယ့် ? ? ရှယ် Set လေးကိုတွေ့ပြီးရင် ချက်ချင်းအပြေးသွားချင်ရင် အဆင့်သင့်ဖြစ်အောင်လို့ပါ ? )
ရှယ်တန်တဲ့ ပင်လယ်စာဆိုင်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Bamar Seafood House ဖြစ်ပါတယ်။ လေးယောက်အပြတ်တီးနိုင်မယ့် ဂဏန်း ၊ ပုဇွန် ၊ ဂုံးတွေပလူပျံနေပြီး Spicy Tomyum , Grilled , Curry အရသာသုံးမျိုးနဲ့ရနိုင်မယ့် ပင်လယ်စာဗန်းကြီးတစ်ဗန်း ၊ သင်္ဘောသီးထောင်း ၊ .အိအိစက်စက်လေးနဲ့ အသားမွမွလေးကို ရှယ်စားရမယ့်ဝက်ဂုတ်သားကင် ၊ စပါးလင်နံ့သင်းသင်းလေးကို ဂုံး ၊ မှိုတွေနဲ့ရောပြီး အရသာပျော်ဝင်ချက်ပေးထားတဲ့ ဂုံးစပါးလင်ဟင်းချို ၊ လီမွန်တီး ချိုချဉ်အေးလေးကိုလည်း Jar ပုံစံခွက်နဲ့(၄)ခွက်တောင် ချပေးထားပြီး (၁) set လုံးကိုမှ (၂)သောင်းကျပ်တည်းဆိုတော့ စျေးနှုန်းကလုံးဝအမေးဇင်းပဲနော်။ ? ? တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ (၂)သောင်းတန် set က မေလ(၁၀)ရက်နေ့ထိပဲဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ဖြုန်းမနေတော့ဘဲ မြန်မြန်လေးသွားစားဖို့တော့လိုမယ်နော်။
ဂဏန်း ၊ ဂုံး ၊ ပုဇွန်တွေကိုရောပြီးမစားချင်ဘူးဆိုရင်လည်း တစ်မျိုးချင်းစီကို ဟင်းပွဲတွေမှာစားလို့ရပါသေးတယ်။ ဒီလိုမျိုးရှယ်တန်ပြီးရှယ်ကောင်းတဲ့ ပင်လယ်စာတွေရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ကတော့ လုံးဝကွက်တိပါပဲနော်။ Bamar Seafood House ရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၁၂၅/၂) ၊ (၁၄/၃)ရပ်ကွက် ၊ သံသုမာလမ်းမကြီး ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Promotion ကာလမကုန်ခင်လေး မြန်မြန်ဒိုးနိုင်ဖို့ အချိန်မီသတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်တယ်နော်။
Image Source : www.facebook.com/bamarsefoodhouse